"Aspray Yandibatsira Kuita Bhizinesi Kuzvikudza" | Franchiseek
Franchiseek»"Aspray Franchise Akandibatsira Kubudirira Bhizinesi kuti Ndizvikudze"
Makore matatu seAspray Franchisee akapa Mersey anobva, Colin Felton, "bhizinesi kudada naro.. Uye anodada aanofanirwa kuve, mushure mekukunda Mubairo Wekuwedzera Milezi kuma2019 Aspray National Conference nekuda kwekuenderera kwake kuvaka bhizinesi hombe uye arinani uye pagore, uye kuzvipira kwake kunogara pakupa basa rakatanhamara kune mumwe nemumwe wevatengi vake.
Colin anoitawo basa rakakosha mukati meAspray network, achipa muripo uye nekutaura kune vanofarira mukana pane zvaakasangana naye seAspray franchisee.
Takamubata naColin nguva pfupi yadarika kuti tiwane pfungwa dzake pakuva Aspray Franchisee makore matatu zvichienda mberi.
Yedu Aspray Franchisees projekiti inogadzirisa kukuvara kwezvinhu inishuwarenzi zvichemo pachinzvimbo chemuridzi. Basa iri rinorevei kwauri?
Management chirongwa chezvekuparadza dzimba inshuwarheni zvinoti nezve kutendeseka, kuvimbika uye hukuru hwekutaurirana. Maitiro angu ndeekubata vatengi zvinhu sekunge yanga iri yangu imba, ndinogara ndichizvibvunza kuti 'ndingafare here kugamuchira izvozvo mumba mangu'.
Kuita pachinzvimbo chemuridzi wenhepfenyuro, ndinovavarira kutora marwadzo nekushushikana kure nechaipomerwa nekuita nezvese zvine chekuita nekukuvara kwezvemukati, izvi zvinosanganisira kutaura kune inshuwarari, kunyatsoongorora kamuri yega yega kuti inokuvara, kuraira vanamakontrakiti vatariri uye kutarisisa hunhu. zvekugadziriswa kwavo.
Bhizinesi rako parizvino rakura kuva ndima yechipiri. Iwe ungati kudzidziswa kwakapihwa neiyo franchisor kwakubatsira iwe kuita bhizinesi rako pasi?
Kunyangwe ini ndanga ndatova neruzivo rwakanaka rwezvitarisiko zvemabatiro, ndakaona zvichikosha kwazvo. Chimwe chakanakira kwandiri yaive mukana wekudzidzira kushandisa komputa software package. Ndakashaiwa chivimbo chekushandisa laptop nekuti ini ndaimbojairwa admin.
Mugore rangu rekutanga, ndakapfuura zvinangwa zvebhizinesi zvandakazvimiririra izvo zvakandipa chivimbo chekutenga chikamu chechipiri, chandiri kuvaka ndichishandisa hunyanzvi hwandakadzidza kubva pakudzidziswa kwekutanga uye pabasa. Parizvino, ini handina kana kumbopaza maficha pamusoro penzvimbo itsva uye ndiri kunzwa kushupika nezveramangwana rebhizimusi rangu, iri kunzwa kukuru kuve naro.
Iwe wakawana sei rutsigiro runopfuurira kubva kuAspray head office?
Tsigiro inogara iripo kana iwe uchida kana uchida. Chikwata chekudaidzira chaigara chakave chinonakidza neni, kunyanya kana ndakave nenyaya dzehunyanzvi. Izvi ndizvo zvakafanana neakaundi timu akagara aripo kubatsira uye ini ndinogona kuvimba nekutengesa kana kushambadzira rutsigiro kana ndakumbirwa.
Kuziva izvo iwe zvaunoziva ikozvino, iwe uchaita kudhara uku zvakare?
Kurudziro yangu huru yekutenga imba yeAspray yaive yekuvandudza hupenyu hwehupenyu hwangu nemukadzi wangu, Sandra. Muchokwadi, Sandra ikozvino akandibatanidza mubhizinesi, achindibatsira nerutivi rwe admin zvinhu. Isu tinoita sekunge takasika bhizinesi rakapetwa ka chiito.
Mudzimai wangu neni tinogovanachido chekufambisa muchikepe uye kuva nebhizinesi rakabudirira kwakatitendera kushandisa nguva yakawanda pane yacht yedu. Izvozvi nekuti vana vese zvavakura, tinogona kupedzera svondo svondo rese tichizorora uye tichiita chimwe chinhu chatinofarira isu vaviri, chiri pakupedzisira ndozvazviri.
Kuti uone kuti ungaitawo sei kuva franchisee neAspray, Click Here.